Lozam-piarakodia :: Kamiao nifatratra tamina trano teo amoron-dalana • AoRaha
Lozam-piarakodia Kamiao nifatratra tamina trano teo amoron-dalana
Tra-doza ny kamiao iray nandeha tany amin’ny lalam-pirenena fahafito, tany amin’ny fokontanin’Alatsinainy eo am-pidirana ny tanànan’Ambalavao, omaly maraina. Nidona tamina trano biriky teo amoron-dalana ilay fiarabe.
Voatronginy ihany koa ny tamboho. Nifatratra teo amina trano fivarotana iray teo am-pita izy, taorian’izay. Tsy nisy ny aina nafoy, tamin’io loza io. Naratra kosa ny mpamilin’ny kamiao. Nieren-doza ny olona natory tao amin’ireo trano lasibatra, araka ny fampitam-baovao avy any an-toerana.
“Tamin’ny roa ora sy sasany maraina no nisehoan’ny loza. Taitra ny mponina teo amin’ny manodidina ka nifamoha nijery ny zava-misy. Navotana haingana ireo olona nipetraka tao amin’ny trano nifatraran’ilay kamiao. Fiarabe hianatsimo ity niharam-boina ity. Ora maromaro taty aoriana vao tafiala teo ilay fiara. Heverina ho rendriky ny torimaso ny mpamily ka izany no nahatonga ny loza”, hoy ny olona mipetraka any Alatsinainy Ambalavao.
Fahitana razana :: Fatin-jazarano nariana tao amin’ny lakandranon’Andriantany
Fanafihana teny Itaosy cite :: Nampisahotaka ny asan-jiolahy tao amina « cash point »